Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Na -eme Nigeria » Tweeting bụ ikike mmadụ - dịkwa na Naịjirịa
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • omenala • Education • Entertainment • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ndị ọchụnta ego Naịjirịa, ndị ọrụ katọrọ nkwụsị Twitter na mba ahụ
Naịjirịa tụfuru ntụpọ ise, ruo 120, na 2021 World Press Freedom Index nke ndị nta akụkọ na -enweghị oke, nke kọwapụtara Naịjirịa dị ka otu n'ime mba “kacha dị ize ndụ ma sie ike” na West Africa maka ndị nta akụkọ.
A na -atụ anya na gọọmentị Naịjirịa ga -ewepu Twitter 'n'oge adịghị anya'.
A machibidoro mmachibido iwu gọọmentị Naịjirịa na Twitter n'ọtụtụ obodo.
Nnwere onwe ikwu okwu na -emebi ngwa ngwa na Naịjirịa.
Mgbe ha nwetasịrị mmeghachi omume n'etiti ndị ọrụ mgbasa ozi na -elekọta mmadụ na ndị na -akwado ihe ndị ruuru mmadụ maka imebi nnwere onwe ikwu okwu na imebi ụzọ azụmaahịa na Naịjirịa, gọọmentị mba Afrịka kacha nwee ọnụ kwuru na ọ 'na -atụ anya' ibuli mmachibido iwu ya na Twitter, nke ekwuputara na June , n'ime “ụbọchị ole na ole”.
Nkwuputa ahụ welitere olile anya n'etiti ndị ọrụ Twitter na -achọsi ike ịlaghachi na igwe mgbasa ozi na -elekọta mmadụ ọnwa atọ ka nkwụsị ahụ malitere.
Mịnịsta na-ahụ maka mgbasa ozi na Naịjirịa bụ Lai Mohammed gwara ndị nta akụkọ mgbasa ozi na-esote ụlọọrụ taa na gọọmentị obodo maara nchegbu Twitter mmachibido iwu n'etiti ndị Naịjirịa.
Mohammed kwuru, "Ọ bụrụ na akwụsịla ọrụ ahụ ihe dị ka ụbọchị 100 ugbu a, enwere m ike ịgwa gị na anyị na -ekwu maka ụbọchị ole na ole, naanị ụbọchị ole na ole ugbu a," Mohammed kwuru, na -enyeghị oge.
Mgbe aga n'ihu n'ihu, Mohammed kwuru na ndị ọchịchị na ndị ọrụ Twitter kwesịrị 'tụọ akara nke m ma gafee T' 'tupu ha enweta nkwekọrịta ikpeazụ.
“Ọ ga -abụ nnọọ n'oge na -adịghị anya, were okwu m maka nke ahụ,” ka onye ozi ahụ kwuru.
Gọọmentị Naịjirịa akwụsịla Twitter na mbido June ka ụlọ ọrụ ahụ wepụrụ ọkwa sitere n'aka Onye isi ala Muhammadu Buhari nke na -eyi ndị na -ekewa mpaghara egwu, nke nnukwu mgbasa ozi na -elekọta mmadụ kwuru na -emebi iwu ya. Onye ọkaiwu Naịjirịa gara n'ihu kwuo na ekwesịrị ịkatọ ndị dara iwu a.
Na nzaghachi, ọtụtụ ndị Naịjirịa na otu ndị na -ahụ maka ikike ime obodo gbara akwụkwọ n'ụlọ ikpe mpaghara na -achọ iwepụ mmachibido iwu gọọmentị na Twitter, na -akọwa mkpebi ịkwụsị ọrụ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi na -ewu ewu nke ukwuu dị ka ịnwa imechi nkatọ.